Chikafu Packaging Fekitori, Vatengesi - China Chikafu Packaging Vagadziri
100ml-250ml-500ml-1L-3L Kubika mafuta camellia mbeu yemidziyo ine spout kutenderera isina chinhu simbi yemafuta emataini
Chitupa cheUN chisimbiso chakanaka, anti-corrosion Kuisa chisimbiso kwakanaka, chikafu garde kupfeka.
100% bvunzo ne otomatiki chisimbiso bvunzo michina.
CMYK off-set kudhinda kana pasina kudhinda.
Usage pane: olive olive edible oil, coconut oil, sunflower mbeu yemafuta.
250ml-500ml-1L-5L Tinplate Inogona kurongedza mafuta omuorivhi
Rondedzero Tsananguro 250ml-500ml-1L-5L Tinplate Inogona kurongedza maorivhi Oiri Chikafu-giredhi uye SGS yakatenderwa tinplate (0.21-0.28mm) Dimension Sekuona pazasi runyorwa Mashandisiro Oiri reMiorivhi, mafuta ekubikisa, oiri yezuva, nezvimwewo. Zvimwewo Zvinyorwa zvepurasitiki mubato uye muromo, unodonhedza-humbowo hunogona Byland Can's tini anoshandiswa kurongedza mafuta anodyiwa kubva pasirese pasirese. Oiri maorivhi ndiyo yemhando yepamusoro mafuta anodyiwa muchimiro. Mapurazi mazhinji anoshandisa tinplate magaba ekurongedza. Tine hukuru hwese uye ...